Countries Afghanistan (8) Australia (8) Bangladesh (12) Bhutan (8) Brunei Darussalam (29) Burundi (9) Cambodia (22) China (8) Cook Islands (8) DR Congo (Kinshasa) (9) Eswatini (8) Fiji (8) India (8) Indonesia (29) Japan (13) Kazakhstan (8) Lao PDR (17) Malaysia (23) Maldives (8) Marshall Islands (8) Micronesia (8) Mongolia (8) Nauru (8) Nepal (8) New Zealand (9) Niue (8) Pakistan (8) Palau (8) Papua New Guinea (8) Philippines (25) Samoa (8) Singapore (17) Somalia (9) South Korea (9) South Sudan (9) Sri Lanka (8) Sudan (9) Syria (9) Tajikistan (8) Thailand (19) Tonga (8) Turkey (8) Turkmenistan (8) Tuvalu (8) Ukraine (8) Uzbekistan (8) Venezuela (8) Vietnam (21) Yemen (9)
Topics Counter-Terrorism (1) Disarmament, Non-Proliferation, and Arms Export Control (3) EU International Cyberspace Policy (1) EU information in Russian (5) Human Rights & Democracy (12) Humanitarian & Emergency Response (1) Nuclear Safety (1) Refugee protection & Migration (3)
Organisations African Union (AU) (3) African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) (2) Andean Community (1) Asia-Europe Meeting (ASEM) (3) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (32) Central American Integration System (SICA) (1) Common market for eastern and southern Africa (COMESA) (1) Communauté Économique des États de l’Afrique Central (CEEAC) (2) Council of Europe (2) Economic Community of West African States (ECOWAS) (1) European Economic Area (EEA) (1) Foreign Affairs Council (2) Gulf Cooperation Council (GCC) (2) Indian Ocean Commission (1) Intergovernmental Authority on Development (IGAD) (1) League of Arab States (LAS) (1) Order of Malta (2) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2) Organisation for Security&Co-operation in Europe (OSCE) (3) Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) (1) Organisation of Islamic Cooperation (OIC) (1) South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) (1) Southern African Development Community (SADC) (1) UN Geneva (6) UN New York (5) UNESCO (1) Union for the Mediterranean (UfM) (2) World Trade Organization (WTO) (2)
Select... HRC 39 (1) Human Rights Council (3) hrc 42 (2)
Editorial team... (1) (13) (25) (3) (3) (83) Strategic Communications (7)
Post date... 2014 (1) 2016 (15) 2017 (37) 2018 (49) 2019 (32) 2020 (1)
၂၀၂၀ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ ျမွင့္တင္ရာတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၏ ရႈးမန္းဆုမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 15/01/2020
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်ခြင်း- ဥရောပသမဂ္ဂ၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ချီသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် ပြည်သူပေါင်း ၁၀၅,၀၀၀ ကျော်မှာ နေရပ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ဆိုသည်မှာ အဆိုပါဒုက္ခသည် အများအပြား၏ အနာဂတ်ဘဝတည်ဆောက်ရေးအတွက် ခိုင်မာကောင်းမွန်သော
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 16/12/2019
#စိန်ခေါ်မှုအစစ်အမှန်: ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် ထုတ်ပြောလိုက်ပါ၊ ကလေးတို့
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသဘောတူစာချုပ် နှစ် ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ကလေးသူငယ်များ၏ အနုပညာလက်ရာများအတွက် ဆုပေါင်း ၃၀+၁ ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 10/12/2019
ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူမှုရေးရာနင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အဆင့်အတန်းသို့ ရောက်ရှိရန် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ တိုးမြှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည်
ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သော SMART Textile & Garments စီမံကိန်းသစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် လူမှုရေးရာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုမြင့်တက်လာစေရန် နာမည်ကြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂနှင့် စီးပွားရေးအသင်း အဖွဲ့များနှင့်
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 06/12/2019
ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 19/11/2019
Greener production in Myanmar's growing food and beverage industry
Industrial wastewater pollution from Myanmar's growing Food and Beverage industry- the country's largest industrial sector, accounting for almost 60% of all companies – posesasignificant threat to the freshwater ecosystem in Myanmar. The European Union supports small & medium
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 15/11/2019
ကေလးပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ: သင့္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေရးဆြဲပံုေဖာ္ၿပီး ဆုမ်ားကို ရယူလုိက္ပါ!
ကေလးသူငယ္တိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိသင့္၊ ရရွိထုိက္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးတစ္ဦးဟာ ေက်ာင္းမွာပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသလို အားလပ္ခ်ိန္မွာ ကစားခြင့္၊နားခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢက အဲ့ဒီအခြင့္အေရးေတြအျပင္ ကေလးေတြရရွိခံစားထုိက္တဲ့ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
Author: Press and Information Team of the Delegation to Myanmar - Publication date: 08/11/2019
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရားဝင်သစ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သစ်တောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ကုန်သွယ်မှု အတွက် ပူးတွဲကတိကဝတ်အပေါ် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သစ်ကုန်သွယ်ခြင်း တရားဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းပြမြေပုံကို စတင်ရေးဆွဲရန် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူဦးရေ ၁၄၀ ကျော်သည် နေပြည်တော်ရှိ ရွှေစံအိမ်ဟိုတယ်၌ တွေ့ဆုံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။